Daawo Sawirro laga helay Ciidamada AMISOM oo Duulaan ku ah Deegaano ka tirsan Sh/hoose. – Xeernews24
Daawo Sawirro laga helay Ciidamada AMISOM oo Duulaan ku ah Deegaano ka tirsan Sh/hoose.
7. November 2017 /in Guud Ahaan, WARAR/NEWS /von admin
Ciidamada AMISOM ayaa Gobolka Shabeellaha hoose ka bilaabay hawlgal ballaadhan oo ay kula dagaalamayaan ururka Al-Shabaab, waxayna Ciidanka AMISOM ku sugan yihiin wadooyinka muhiimka ah ee Gobolka.
Lt Col Bagenda, oo ah Taliyaha Ciidamada Hawlgalka Uganda qaybta 11-aad ayaa sheegay Ciidanka AMISOM oo garab ka helaya kuwa xoogga in Hawlgal culus ay ka wadaan Gobolka Shabeellaha Hoose, si la isugu furo wadooyinka Muqdisho iyo Shabeellaha hoose, si ay u soo laabtaan adeegyada caadiga ah ee wadooyinkaasi.
“Hadafka hawlgalka maanta waa in aan ka cirib tirno Al-Shabaab goobaha guud, dabcan wad ogtahay in Amisom ay halkan u joogto si ay u taageerto ciidamada ammaanka qaranka Soomaaliyeed oo nooga sii horreeya hawlgalka.” Ayuu yidhi Israel Kaheru Bagenda, Taliyaha ciidamada Hawlgalka Uganda qeybta 11-aad.
Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay Ciidamada Amisom oo aad u hubeysan garabna ka helaya Ciidanka xoogga in ay hawlgalka ka bilaabeen deegaanada duleedka ka ah Afgooye, Balidoogle, Ceelasha-biyaha, Ciraaq, Basra, iyo degaano kale.
Dhaqdhaaqa Amisom ay ka bilaabeen Gobolka Shabellaha hoose, ayaa ujeedkiisa wuxuu yahay inay gaadhaan deegaano iyo Degmooyin ka tirsan Gobolka Shabellaha hoose oo Shabaab ay joogaan.
Laakiin waxaa isweydiin mudan ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom oo deegaano fog fog oo Shabellaha hoose jooga, sida Shabaab ay ugu suuragashay inay haystaan Basra oo hadda laga saaray iyo deegaano Afgooye ku hareeraysan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/Amisom-Shabellaha-hoose-4.jpg 427 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-11-07 09:02:032017-11-07 09:02:35Daawo Sawirro laga helay Ciidamada AMISOM oo Duulaan ku ah Deegaano ka tirsan Sh/hoose.
MUUQAAL: Sixiroole dhacay Ganacsatadii Hargeysa (Daawo Sida yaabka leh ee uu... AMISOM :- Degmo Walba oo ay shabaab joogaan Anaga iyo Ciidanka Soomaali waan...